कहिले भयो ऐनाको आविष्कार ? को हुन् ऐना हेर्ने पहिलो व्यक्ति ? - बडिमालिका खबर
काठमाडौं — ऐना नहुँदो हो त के हुन्थ्यो होला ! कहिल्यै सोँच्नुभएको छ ? वास्तवमा ऐना सानो चिज भैकन पनि मानव जिवनको अभिन्न हिस्सा भैसकेको छ । हामी कस्तो देखिन्छौँ ? कस्तो देखिन चाहन्छौँ ?
आदिवासी नाइके पुयाले चाहिं ऐना कुनै जादुको वस्तु भएको र पुर्वजहरुले ल्याएको ठहर गरे । जबकी पुया नै एक जादुगर भएको र आफ्नो शक्तिका कारण आफ्नो आदिवासी समुदायलाई नियन्त्रण गरिरहेको ज्याक हाइड्सको ठम्याई थियो । एजेन्सीको सहयोगमा ।